GREENLAND IMBWA INOBEREKA RUZIVO UYE MIFANANIDZO - IMBWA
Greenland Imbwa Inobereka Ruzivo uye Mifananidzo
Grit iyo Greenland Imbwa, foto iratidzwe neSLEDOG Alaskan Malamutes & Greenland Imbwa muUK
Iyo Greenland Imbwa yakafanana neCanada Eskimo Sleddog, asi haina kurema uye yakati rebei zvishoma. Iyo ine gobvu rekumira-kure jasi rekunze uye rakakora pasi pemvere dzemakwai, rinoitendera kuti rimirire kugara kwekunze kwekunze mumatembiricha anogona kusvika -50 kusvika -75 madigiri Fahrenheit. Ine nzeve diki denderedzwa idzo dzinowanzoita chando. Musoro wacho wakasimba, wakafara uye wedanda wakaumbwa. Shaya dzakanyanya simba. Ine muswe muhombe, une gwenzi, uyo unopota pamusoro wembwa kumusana uye unodzivirira kumeso kwembwa payakarara. Makumbo akanyatsoita minhenga uye zvigunwe zvakakora zvakasungwa nemapedhi mahombe.
Aloof uye yakazvimiririra kwazvo, iyo Greenland Imbwa inogona kuve nerudo nemuridzi waanosunga naye. Rudzi urwu runoramba rwuri imbwa inoshanda. Iyo ine yakajairika Nordic, yakanaka, yakavimbika hunhu, asi kana imbwa dzichishanda muzvikwata, hadzina mukana wekuvandudza hukama natenzi mumwe. Ivo vakazvimiririra, vanozvida, vane rowdy uye vane ruzha mukutamba kwavo. Iyi imbwa haigutsikane nekungorara wakakomberedza imba zuva rese kureba iyo Greenland Imbwa inoda kushanda kana kuve nerumwe rudzi rwechiitiko chine simba Munguva pfupi yapfuura yakave yakakurumbira muNorway neSweden se mumwe anofamba musango . Rudzi urwu runogarawo nemaEskimo uye runogovana nematambudziko anotarisana nemaEskimo. Ivo vanodhonza masiles uye vanobatsira nekuvhima mabheya uye zvisimbiso. Ivo kazhinji vane hushamwari kune vanhu uye havana chekuchengetedza kana chekudzivirira, asi zvavo hunyanzvi hwekuvhima zvakagadzirwa kwazvo. Kudzidzisa imbwa idzi kunonetsa kwazvo uye zvinotora zvakawanda yakasimba, hutungamiri hune moyo murefu kudzidzisa imbwa hunyanzvi hunodiwa. Rudzi urwu rwuchiri nekuchengeta yakawanda yemhumhi zvisikwa uye hunhu. Yavo Arufa pack yemasikirwo yakasimba kwazvo. Muridzi weGreenland Imbwa anofanirwa kuve hukuru kwazvo uye kukwanisa kuratidza imbwa ndiye Arufa. Imbwa dzinofanira kugamuchira muridzi semutungamiri. Rudzi urwu runofarira kutenderera. Imbwa dzeGreenland dzinoonekwawo mune imbwa inomhanya nemaseleti kana ngoro.
Kureba: 22 - 25 inches (56 - 64 cm)
Kurema: 66 - 70 mapaundi (30 - 32 kg)
Kazhinji zvine hutano
Iyo Greenland Imbwa haina kunaka kune hupenyu hwemafurati. Inoda nzvimbo, nzvimbo yekumhanyisa uye nebasa rekuita. Rudzi urwu runogona kugara kunze. Inogona kumira kutonhora kutonhora uye haifarire kupisa kwakanyanya.
Iyo Greenland Imbwa haisi yerudzi rwekupokana unorara wakakomberedza imba yako. Inoda kutorwa zuva nezuva, kureba kufamba nekukurumidza , uye inoda kuve nebasa rekuita. Uchiri panze pakufamba ita chokwadi chembwa chitsitsinho padivi kana kuseri kwemunhu akabata, kwete kumberi, sekufunga kunoita imbwa imbwa mutungamiri anotungamira nzira, uye mutungamiri iyeye anofanira kuve munhu.
Anenge makore gumi nematatu
Vanenge vana kusvika kumatanhatu vana
Bhurai dzimwe nguva
Iyi imbwa yerudzi rweSpitz yave iripo munzvimbo dzese dzeArctic kubvira kare. Madzitateguru erudzi urwu anogona kuteverwa kumashure kune imbwa dzinoperekedza vanhu kubva kuSiberia makore anopfuura gumi nemaviri apfuura. Sezvo vanhu ava pavakakura kuva Inuit yanhasi, vanogona kunge vakashandisa mapere emuno kubereka baba. Greenland Imbwa hazviwanzo kuwanikwa. Vazhinji vanhu vanowana iyo Greenland Imbwa vakavatengesa kubva kuGreenland kana vakatora imba imwe kubva kushanya ikoko, kana kubva kushamwari vanga variko. Marita mashoma kwazvo anozvarwa.
SPK = Yakakoshaclub
Otis iyo Greenland Imbwa, foto iratidzwe neSLEDOG Alaskan Malamutes & Greenland Imbwa muUK
Mufananidzo urikudzwa naKennel Narsarsuaq's
Mufananidzo nerubatsiro rwaKennel Polarna Legenda anobva kuPoland
Ona mimwe mienzaniso yeiyo Greenland Imbwa
Greenland Imbwa Mifananidzo 1
Sled Imbwa Inobereka
Kemmer Stock Mountain Anotuka
great dane saint bernard musanganiswa uri kutengeswa
goridhe retriever siberian husky musanganiswa
chihuahua jack terrier sanganisa vana
nhema uye shava wiener imbwa
mutambi wetsiva musanganiswa negerman mufudzi
shar pei uye chirungu bulldog musanganiswa